Etazonia Ho eo anilan’i Madagasikara hatrany
Namoaka fanambarana mikasika ny fifidianana notontosaina tamin` ny 07 novambra teo ny Masoivoho amerikanina. Manantitra ny fiarahabana ny vahoaka Malagasy izahay,
hoy ny Atoa Stuart Wilson mpiandraiki-draharahan’ny Masoivoho Amerikanina noho ny nandraisany anjara tao anatin’ny filaminana tamin’ny fifidianana filoham-pirenena amin'izao fotoana tena manan-danja izao eo amin'ny fiainan'ny firenena noho ny fanajany ny fomba amam-pihetsika demokratika. Manohy mamporisika ny fizotry ny fifidianana azo antoka sy marina ary mangarahara i Etazonia. Androany (ndlr: omaly), ankoatra ny fandraisanay anjara amin'ny famatsiam-bola amin'ny SACEM, dia hitsangana indray miaraka amin'ny vahoaka Malagasy amin'ny alàlan'ny fametrahana ireo mpanara-maso manerana ny firenena. Nambaran`i Stuart Wilson, fa tao anatin’ny 150 taona izao no efa niara-dia tamin’i Madagasikara hatrany i Etazonia ho fanohanana ny demokrasia. Nahafaly anay ny nandray anjara tamin’ny fanarahamaso ny fifidianana tsy nahitana fihantsiana na herisetra. Rehefa voafidy ara-dalàna sy mahavita ny fianianany ny Filoha vaovao, dia adidinareo ny mitaky ny tamberinandraikitra avy aminy mba hiantohana ny fanajana ny tany tan-dalàna sy fitondrana tsara tantana. Izahay Amerikana dia hitoetra eo anilanareo Malagasy namanay hatrany ary maneho ny fahavononanay ny mbola hiara-hiasa aminareo ao anatin’ny 150 taona mihoatra manaraka.Nitsidika biraom-pifidianana maromaro niaraka tamin'ireo mpiara-miasa aminy avy amin'ny Misionera Amerikana moa ity diplaomaty ity omaly.